Voasambotry ny zandary niaraka tamin’ny basy, moto: vehivavy ny 5 tamin’ireo 11 mpanao “kidnapping” | NewsMada
Voasambotry ny zandary niaraka tamin’ny basy, moto: vehivavy ny 5 tamin’ireo 11 mpanao “kidnapping”
Miandahy miambavy, ara-bakiteny ity tambajotra malaza iray mpanao ”kidnapping” ity. Dimy tamin’ireo 11 voasambotry ny zandary mantsy no vehivavy. Nandamoka ny teti-dratsy saika hakan’izy ireo an-keriny vehivavy teratany karana iray tetsy Ankadivato.
Nahazo angom-baovao momba ity fikasan-jiolahy haka an-keriny teratany karana mizaka ny zom-pirenena frantsay teny Ankadivato ity ny zandary avy ao amin’ny vondron-tobim-pileovan’ny zandarimaria Analamanga, ny 5 aogositra 2019 lasa teo. Niainga teo ny fanadihadiana sy ny fikarohana nataon’ny zandary momba ity raharaka fakana an-keriny ity. Nahitam-bokany izany, ny 18 aogositra 2019 lasa teo satria nisy ireo olona voasambotra na dia nisafidy ny tsy hanome vaovao momba ity raharaha ity mihitsy aza ny fianakavian’ilay niharan’ny fakana an-keriny, araka ny tatitra nampitain’ny zandary avy ao amin’ny vondron-tobim-pileovana Analamanga. Niaiky ny heloka vitany ireto jiolahy tratra ireo ka niainga avy amin’ny famotorana azy ireo no nahafahana nisambotra ireo namany izay efa nisy nitsoaka tany amin’ny faritra Matsiatra Ambony. Nohamafisin’ny zandary fa miisa 11 izy ireo ka misy mpivady raha vehivavy kosa ny dimy ary lehilahy ny enina ambiny.
Nandoa vola ny fianakaviany…
Nandritra ny famotorana sy ny fanadihadiana azy ireo no nilazan’izy ireo fa mampiasa fitaovam-piadiana sy moto ry zalahy rehefa manatanteraka ny asa ratsiny. Isan’izany ny moto Scooter efatra sy basy poleta roa, bala miisa 49, telefaonina finday miisa efatra miaraka amin’ny odigasy ary kara-panondro hosoka maromaro izay nahafahany nividy puce maromaro hampisaina amin’ny fakana an-keriny toy izao. Nambaran’ny zandary fa efa tafaverina amin’ny fianakavianay ity teratany karana nalaina an-keriny ity taorian’ny fandoavana ny vola notakin’ireo jiolahy ireo. Nomarihin’ny zandary hatrany fa tsy nisy fitarainana na fampandrenesana momba ity raharaha fakana an-keriny ity mihitsy tonga teo anivon’ny zandarimaria fa niainga tamin’ny angom-baovao hatrany izy ireo ka izao niafara tamin’ny fahasamborana ireto tambajotran-jiolahy ireto. Nanantitrantitra hatrany ny kaomandin’ny vondron-tobim-pileovana Analamanga mba hanomezan’ny olona vaovao hatrany raha misy ny tranga mampiahiahy momba ny tsy fandriampahalemana.